Dagaalyahanno Daacad u kala ah All Shabaab iyo Abuu Roobow oo ku Dhintay Dagaalkii ka dhacay Bakool – Radio Jowhar
Dagaalyahanno Daacad u kala ah All Shabaab iyo Abuu Roobow oo ku Dhintay Dagaalkii ka dhacay Bakool
Comments Off on Dagaalyahanno Daacad u kala ah All Shabaab iyo Abuu Roobow oo ku Dhintay Dagaalkii ka dhacay Bakool 45 Views
Ugu yaraan 19 dagaalyahanno oo ka kala tirsan Al Shabaab iyo ciidamo daacad u ah Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur, ayaa ku dhintay dagaal xooggan oo Arbacadii shalay ka dhacay galbeedka Gobolka Bakool, sida saraakiil ay sheegeen.
Xaaladda ayaa maanta degan, sida la soo sheegayo. Sidoo kale waxaa jira warar aan la xaqiijin oo sheegay in Mukhaar Roobow uu helay gurmad xooggan.
14-ka bishii June ee sanadkan, Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay go’aankii ay dowlada Mareykanka ugu saartay liiska Argagixisada Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo kamid ahaa Hogaamiyayaasha ugu sareeya Dagaalyahannada Ururka Al Shabaab.
Wasiirka Warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan Cabdi Maxamed ayaa sheegay in Koonfur Galbeed Soomaaliya ay soo dhaweyeen go’aankasi isaga oo sheegay iney sharaf weyn u tahay dhammaan ummada Soomaaliyeed.
Dhinaca kale wasiirka ayaa shaaciyay in maamulka Koonfur Galbeed aysan weli heynin war rasmi ah oo uu Mukhtaar Roobow ku cadeeyay inuu ka soo goostay Ururka Al Shabab.